Cudur halis ah oo ka dillaacay gobolka Bakool | KEYDMEDIA ONLINE
Cudur halis ah oo ka dillaacay gobolka Bakool
Cudurro aan la aqoonsan aaa ka dillaacay degaannada Rabdhuure iyo Ceelbarde, oo dhaca koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool.
Bakool, Soomaaliya - Xoolo-dhaqatada ku nool degaannada Rabdhuure iyo Ceelbarde, oo dhaca koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool, ayaa ka cabanaya cudur aan la aqoonsan oo dilaya xoolaha sida ariga iyo geela, tan iyo bishii May ee la soo dhaafay.
Nasro Cabdi Maxamed, oo ari ku dhaqata tuulada Caato, ee gobolka Bakool, ayaa sheegtay in 24 ka mid ah 120 neef oo ari ah ay weysay muddo saddex toddobaad ah, waxay tilmaamtay in ariga ay qabaneyso qandho uusan la socon kirin, taas oo ugu danbeyn uu u geeriyoonaayo muddo 24 saacadood gudahood ah.
“Reer guuraagu waxay qoysaskooda ka biilaan iibinta caanaha iyo hilibka xoolahooda, Laakiin hadda qof walba wuu ka baqayaa cudurka, ma jirto cid iibsata wax soo saarka geela iyo ariga, ”ayay tiri Nasra.
Sida ay xustay Nasra, waxa ay joojisay inay carruurteeda siiso caanaha iyo hilibka xoolaha, taas badalkeeda waxay sheegtay inay u iibinayso Kalluun iyo Caano-boore iyadoo adeegsanaysa lacag ay ka keydsatay iibinta qaar ka mid ah riyaha ka hor inta uusan cudurku dillaacin.
Nasra waxay sheegtay inay dhuun-yeeriyeen 60 halaad oo geela, sababo la xariira cudurro iyo abaaro baahsan oo dhacay intii u dhaxaysay sanadihii 2017 iyo 2020. Tanina waxay ahayd dhabar jab kale oo ku yimid nolosha qoyska Nasro.
Cali Diiriye Cali, oo ah geeljire ku nool Ceel-magad, ayaa sheegay in lix ka mid ah 10 neef oo geel ah uu ka waayey cudurka dhammaadkii bishii May. Wuxuu ka walwalsan yahay in geelihiisa haray iyo 150 ari ah ay qaadaan cudurka.
Axmed Yussuf Carab, oo ah dhakhtar xoolaha ku takhasusay ayaa sheegay in dadka xoola dhaqatada ah ay isticmaalaan dawooyin antibiyootiko ah oo ay u maleynayaan inay caawin kartaan xoolaha jiran.
Axmed isaga laftiisu wuxuu booqday tuulooyinka ay dhibaatadu saameysey, wuxuuna ku tilmaamay astaamaha, qaar ka mid ah xoolaha cudurka qaba inay ka dhiig baxayaan sanka iyo malawadka.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa baaritaan ka sameysay Rabdhuure iyo Ceelbarde, hayeeshee wali ma aysan ogaan waxa cudurku yahay, ka hor inta aan la fulin daaweynta iyo talaabooyinka xakamaynta.